Iran: Resabe tamin’ny diplaoma Oxford sandoka nataon’ny Minisitra – 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2021 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Português, 繁體中文, 简体中文, македонски, Español, Swahili, English
(Lahatsoratra tamin'ny volana Aogositra 2008)
Niteraka resabe tamin'ny fampitam-baovao i Ali Kordan, Minisitry ny Atitany vaovao Iraniana, noho ny fanomezany diplaoma doctorat “sandoka” avy amin'ny oniversite Britanika malaza any Oxford. Maro ny tranonkala, anisan'izany ny mpandala ny mahazatra Alef, no namoaka ny dika tamin'ilay “diplaoma mariboninahitra doctorat (honoris causa) momba ny lalàna avy any Oxford”.
Nanamarika hadisoana ara-pitsipi-pitenenana maromaro tao amin'ilay lazaina fa diplaoma avy any Oxford ny Alef, indrindra fa ilay teny hoe “to be benefitted from its scientific privileges”. Ankoatra izay, diso tsipelina lasa “intitled” ny teny hoe “entitled”.
Navoakan'ny Alef tamin'ny aterineto ihany koa ny fax isan-karazany nifanakalozana tamin'ny Oniversiten'i Oxford momba ity resaka ity. Avy eo voasivana tao Iran ilay tranonkala.
Raha mbola teo ampanadihadiana momba ity raharaha ity ny manampahefana Iraniana dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Oniversiten'i Oxford fa tsy nahitana velively diplaoma honoris causa na mari-pahaizana hafa nomena an'Atoa Kordan tany amin'izy ireo.
Naneho hevitra ilay bilaogera Iraniana Mr. Behi:
Nanao fahagagana vaovao ny filoha Ahmadinejad: nifidy olona ho Minisitry ny Atitany izy izay nilaza ho manana mari-pahaizana doctorat momba ny lalàna avy amin'ny oniversiten'i Oxford ! Rehefa nipoitra ny fanontaniana momba ny maha-azo itokisana an'ity diplaoma ity dia tezitra ilay lehilahy ary nandrahona ny fampitam-baovao sy namoaka ity taratasy ity mba hampanginana azy ireo. Diplaoma tena mampiahiahy hany ka inoana fa sandoka, amin'ny fahadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana sy ny anaran'ireo nanao sonia izay tsy mpikambana ao amin'ny Sampana Lalàna akory! Raha te-hangala-bato amin'ny fifidianana manaraka i Ahmadinejad dia aleo izy manakarama olona manao izany mangingina kokoa. Mahamenatra !
Nanoratra i Mohammad Ali Abtahi, filoha lefitra reformista teo aloha sady bilaogera fa nihaona tamina tompon'andraikitra Iraniana iray izay “nividy” ny diplaomany doctorat izy fony lefitry ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny finoana Islamo. 1.000 dolara no vidiny raha ny filazan'i Mohammad Ali Abtahi.
Toa tsy manana mari-pahaizana amin'ny oniversite i Ali Kordan raha ny filazan'ny bilaogera iray hafa, Shirzad. Hoy ilay bilaogera:
Midika izany fa namitaka izy nandritra ny taona maro ary nokaramaina ho dokotera… Nanontany an'i Ali Kordan ny iray tamin'ireo solombavambahoaka ao amin'ny parlemanta Iraniana: “Ahoana no nahazoanao diplaoma doctorat momba ny lalàna kanefa milaza ianao fa nanoratra thèse tamin'ny sehatry ny fanabeazana Miozolomana ? “Ahoana no nanaovanao izany anefa ianao tsy mahay teny anglisy ?” Namaly i Ali Kordan: “Nanana mpandika teny aho”.
Nilaza ilay bilaogera Jomhour fa niaro ny Minisitra ny filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad ary nanontany hoe “Iza no mila izany taratasy izany !
Manontany tena i Jomhour :
Raha tsy misy ilana azy ireo taratasy ireo, maninona ny Minisitra Ahmadinejad no nilaza fa manana izany… Tsy vao izao i Ahmadinejad no nilaza ny antontan-taratasy ofisialy ho tsy misy ilaina azy. Talohan'izay, nolazainy ihany koa fa antontan-taratasy tsy misy ilaina azy ny Fanapahan-kevitry ny Firenena Mikambana manohitra ny programa nokleary Iraniana.
Nilaza i Ali Akbar Javanfekr , mpanolotsainan'i Ahmadinejad amin'ny serasera, fa tokony handray fanapahan-kevitra momba ny doctorat an'i Ali Kordan ny Minisiteran'ny Siansa; nilaza ihany koa izy fa tsara kokoa raha tsy ampidirana fomba fijery politika manokana amin'ity raharaha ity.